Sivavanye i-Sonos Hambisa isithethi esinye sohlobo | Ndisuka mac
Sivavanye i-Sonos Hambisa isithethi esinobubele
Esi sithethi sikaSonos Sokuhlala sikwiimarike kangangexesha elithile kodwa bekungekabikho kude kube ngoku apho siye sakwazi ukufumana enye yazo ukonwabela lonke umgangatho wayo wesandi kwaye kunjalo kuyilo. I-Sonos yenye yeefemu ezijongane nezithethi ze-Apple amaxesha amaninzi kwaye kukuba ngokugqibeleleyo inkampani yaseCupertino inokutyikitya lomgangatho womculo, ukusebenza, ukungqamanisa kunye noyilo.
I-Sonos Move inika umsebenzisi zonke izibonelelo zesithethi sasekhaya ngelixa ivumela ukuba ibe yinto ephathekayo. Ngokusengqiqweni asithethi ngesithethi ekufuneka siphethe ubhaka okanye ngelixa sisenza imidlalo kuba isithethi esiziikhilogram ezintathu, kodwa iyavumela umsebenzisi ukuba ayithathe kwigumbi lokuhlala aye echibini, egadini, ulwandle okanye naphi na enkosi kuyo Unxibelelwano lweBluetooth kunye nokumelana ne-IP56, ezenza ukuba inganyangeki emanzini nakuthuli kwaye nangokuchasana nokuwa okunokubakho, kubalulekile kwisithethi esimiselwe ukuhamba.
Sonos Roam, isithethi esiphathwayo esingadibanisiyo kumgangatho wesandi kunye namandla
Kodwa siza kuhamba ngamacandelo okoko esi sithethi sidibana nezinto ezininzi ezinokukhethwa ngabasebenzisi namhlanje, isithethi sokumamela umculo wethu ekhaya ngokuzolileyo kwaye sikwazi ukuwusa naphina ngaphandle kokuphulukana nomgangatho wesandi okanye amandla. Ngokuqinisekileyo wonke umntu okhoyo sele eyazi ukuba ndivela eMac kwaye ngakumbi ngokobuqu ndinobuthathaka kunye nezithethi zeSonos firm kwaye zizithethi ezikumgangatho ophezulu ngokwenene. Xa sele sitshilo, siza kubona ukuba oku kusinika ntoni, ziiNdlela zokuba ezinye izithethi ezifanayo ezivela kwezinye iimveliso azisiniki zona.
1 Ukuhamba, umgangatho wesandi kunye nokunxibelelana
2 Indlela yokuyibhatala ilula kwaye iyasebenza ngokuzimela ngenkohlakalo
3 Ukuseta i-Sonos Move kuyakhawuleza kwaye kulula
4 Izixhobo ezimangalisayo zesithethi esimangalisayo
Ukuhamba, umgangatho wesandi kunye nokunxibelelana
Singazishwankathela izibonelelo zale Sonos kwezi mpawu zintathu. Ukuhamba okubonelelwa nguSonos kuncitshisiwe xa kuthelekiswa, umzekelo, iSonos Roam kodwa yanele abo basebenzisi bafuna ukuthatha isithethi naphina kwaye qhagamshela ngokulula ngeBluetooth. Unxibelelwano lweWi-Fi luvumela uSonos Hambisa ukonwabela iMultRoom kunye neAirPlay ngenxa yomdibaniso weAirPlay 2. Oku kukuvumela ukuba udibanise ngokuthe ngqo kwizixhobo zethu kwaye kukuvumela ukuba udibanise izithethi ezininzi ngokulula xa sisekhaya.
I-Sonos Move inikezela olu khetho ngaphandle kwento yokuba njengoko besitshilo ekuqaleni ubungakanani bayo (240x160x126 mm) kunye nobunzima bayo (i-3 kg) Azihlangabezani neemfuno ezithile zokuphatheka koku ukuze zibe sisithethi esiphathwayo.
Le Sonos Move kwimeko yam ithathe indawo yeSonos One ebendinayo kwigumbi lokuhlala, kwaye lukhetho olunokuphatheka olunikezelwayo kunye namandla kunye nomgangatho wesandi uyenza ekuphakameni kwee-Apple's HomePods. Kodwa asithethi nge-MiniPod mini, hayi, sithetha ngePodPod yentsusa, isithethi esinomgangatho onesandi esikhohlakeleyo esifana ngokusondeleyo nesihanjiswa yile Move.
Umgangatho wesandi awunakuphikiswa, i-Sonos Move ayinawo amandla, Ngaphandle kwamathandabuzo kuyothusa xa sibeka umthamo ubuninzi. Ukucwangciswa kwezithethi kule ntshukumo kuyenza isithethi "esimninzi" ngoko ke umgangatho weaudio uphuculwe kakhulu, into esingenayo kwi-Sonos One. Umgangatho wesandi ubalasele ngokwenyani, awungekhe ucele ngaphezulu.
Indlela yokuyibhatala ilula kwaye iyasebenza ngokuzimela ngenkohlakalo
Ewe le ntshukumo inento elungileyo kwaye iseti yesandi kunye noyilo kunye nezinye kukucinga okuhle. Kwelinye icala sinesiseko okanye iringi yokutshajisa yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhlawulisa le ntshukumo kodwa ikwanayo nezibuko le-USB C ukuqhagamshela intambo ukuba asifuni ukusebenzisa isiseko.
Umsebenzisi kufuneka abeke isandisi-lizwi ngaphezulu kwendandatho kwaye ilayishwe ngesihlanganisi esisezantsi, ukuyisusa ngokulula ukuyiphakamisa ngesiphatho esingasemva kwaye ungayithatha naphina. Ngokusengqiqweni nathi sinokukhetha yihlawulise ngezibuko lohlobo C lwe-USB olongezayo ngasemva yesithethi xa singekho ekhaya kwaye kufuneka siyibize.
Ukuzimela kwesi sithethi ngaphandle kwamathandabuzo yenye yamandla aso Ibhetri ibonelela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 zexesha lokudlala enkosi kumthamo woku. Ukuhlawuliswa ngokupheleleyo kwesithethi akuthathi xesha lide kodwa kuyinyani ukuba siya kudinga malunga neeyure ezimbini ukuthatha iMove ukusuka kwi-30 ukuya kwi-100% yebhetri yayo. Ukuba sisebenzisa le Hambisa ngevolumu ephezulu kakhulu, ngokuchanekileyo ezi yure zili-10 zokudlala ziya kuncipha kancinci kodwa ibhetri iyothusa kokubini ngomthamo wayo kunye nonyamezelo lwayo kumculo odlalayo.
Uphengululo lweSonos Arc, eyona bar yesandi kwigumbi lakho lokuhlala
Ukuseta i-Sonos Move kuyakhawuleza kwaye kulula
Isicelo seSonos esithethe ngaso kwithuba elidlulileyo sibulela kuzo zonke izithethi zebrendi esiye sazivavanya zinika umsebenzisi indlela elula yokwenza Qhagamshela iiakhawunti zethu zeApple Music, Amazon Music kunye neSpotify.
Nje ukuba uvule isithethi, kuya kufuneka usondeze i-iPhone kwaye i-Sonos icon iyavela ukuze ulandele amanyathelo oqwalaselo. Ilula ngokwenene kwaye iyakhawuleza awuyi kuba nangxaki nangaluphi na uhlobo xa sele usenzile isithethi ekuqaleni kwakho yenza ngokulula i-Alexa okanye uMncedisi kaGoogle ngokufikelela kwi-Sonos App.
Kwakhona kwi-app ye-Sonos Siza kukwazi ukuphatha ngokukhawuleza igama lesithethi kwindawo esiza kuba kuyo, silungiselele ipani yesitiriyo, sichukumise isilinganisi, silungelelanise iTrueplay ezenzekelayo, songeze umda wevolumu ukuze ingavakali kakhulu Qwalasela ukukhanya kwesimo okanye ulawulo lokuchukumisa ukucima. Zonke ezi zikhetho zenziwe kwisicelo seSonos kwaye ziyafumaneka kubo bonke abasebenzisi ngendlela elula necacileyo.
Izixhobo ezimangalisayo zesithethi esimangalisayo
Izixhobo esizifumana kwiwebhusayithi yeSonos yesi sithethi zikukuphakama kwayo. Sineendonga ezininzi zodonga, ibhetri yangaphandle okanye ibhegi yothutho enika ithuba lokuhamba ngokuKhuselekileyo naphi na. Ingxowa egcweleyo ngaphakathi, Ngqongqo ngandlela thile ngaphandle ukunqanda amaqhuqhuva, ngokuqiniswa ngaphezulu kunye ne-zipper ukuze ukwazi ukuphatha intambo yokutshaja ngaphakathi kunye nezinye izixhobo.
Le bhegi yokuphatha ibizwa Ingxowa yokuHamba kwaye ungayifumana i-euro ezingama-89 kwiwebhusayithi yeSonos kwaye ngokwenene kufanelekile ukuba uceba ukuthatha isithethi kude nekhaya, echibini, okanye nakweyiphi na enye indawo kuba iyikhusela ngendlela elungileyo kwaye inika intuthuzelo kwisithethi.
Ngama-euro angama-35 sifumana udonga olunyukayo lwale Sonos Move. Oku kulula kakhulu ukufaka udonga olunyusiweyo kwaye kufuneka ubeke isiseko eludongeni okanye kwindawo apho sifuna ukuxhoma khona uSonos, ubeke iplagi, isikrufu kunye nekhabhathi yerabha ukuze ungonakalisi isithethi ngasemva. Ukuyisusa kwinkxaso, kuya kufuneka uthathe iNtshukumo ngesiphatho esingasemva kwaye unyuse phezulu.
Ukunyuka kodonga kuyafumaneka ukuba kubambe isithethi ngqo ukusuka ezantsi kunye Ibhetri iyasuswa kwesi sithethi Ke ukuba kukho ingxaki kule minyaka idlulileyo sinokuyitshintsha entsha ngendlela elula, ndiyasinika oku ibhetri eyongezelelweyo ngexabiso lama-euro angama-79.
Esi sithethi sigqithile kulindelo ebesinalo. Bonke abo badinga isandisi-lizwi ukuze uthathe kwenye indawo uye kwenye ekhaya okanye uyikhuphele echibini, egadini, elunxwemeni okanye ezifanayo phambi kwesithethi esigqibeleleyo iSonos Move sisisithethi sakho.
La umgangatho wesandi, amandla kunye nokuzimela okukhulu yenza iseti icetyiswe ngenene nokuba awufuni ukusikhupha esi sithethi, kwaye kukuba asijonganga nesithethi esiphathwayo ukuba sisisebenzise okanye ubuncinci ngumbono wesithethi esiphathwayo esahluke ngokupheleleyo kwinto esiyenzayo unokucinga. Izinto ezenziwe ngazo, uyilo kwaye ngokubanzi iseti yonke ibonakala inomtsalane kuthi. Ixabiso lale Sonos Move ngama-399 eeuros, Ixabiso elingaphantsi kodwa elikwinqanaba elipheleleyo leseti lingaphezulu kokugwetyelwa.
Umgangatho ophezulu wokumamela kunye noyilo
Ukusetyenziswa ngokulula, ukulayishwa kunye noyilo
Umgangatho uza ngexabiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sivavanye i-Sonos Hambisa isithethi esinobubele
IMacOS Monterey kunye ne-iOS 15 ziya kukuvumela ukuba urekhode iividiyo zomdlalo kubalawuli abafanelekileyo
Ukukhutshwa kweApple Ukuhlaziywa kweFirmware 3E756 yeeAirPod Max